Ndị ọkà mmụta sayensị buru amụma banyere ala ọma jijiji Nepal | Netwọk Mgbasa Ozi
Saturdaybọchị Satọde gara aga Nepal mara jijiji site na ala ọmajiji 7 ruru na Richter, na-ahapụ ihe karịrị puku mmadụ anọ nwụrụ na mba ahụ na ọtụtụ ndị metụtara na mpaghara ndị gbara ya gburugburu dịka India ma ọ bụ Bangladesh. Ọ dị afọ iri asatọ na otu na a hụbeghị ụdị ihe a, kpọmkwem site na 1934 mgbe ala ọma jijiji gburu puku mmadụ 17 bụ ndị nọ na Kathmandu, isi obodo Nepal.
Ma ala ọma jijiji Nepal, dị ka ndị ọkà mmụta ala, ọ bụ akụkụ nke a »domino effect» nke na-akpụ kọntinent ahụ.
E kewara mbara ụwa n'ime efere tectonic, nke dị n'akụkụ ya bụ nke a na-akpọ mmejọ. Ihe kacha mara amara bụ San Andrés Fault, nke dị na ọdịda anyanwụ North America, na nke na-ekewawanye mpaghara ahụ na North America. N'ihi mmegharị nke ndị a, echiche izugbe nke ụlọ anyị na-agbanwe, jiri nwayọ nwayọ, na-ekewa kọntinent ma ọ bụ na -emepụta ugwu. Ma nsogbu ndị a nwere ike ịdị ize ndụ nye ndị dị ndụ, ebe ọ bụ na ha na-ebute ala ọma jijiji ma ọ bụ oke ebili mmiri, dabere na ebe mmejọ ndị a kpọtụrụ aha dị.
Narị afọ asaa gara aga, n’elu efere ndị Indian na America, oké ịma jijiji abụọ bilitere. Ala ọma jijiji na Nepal izu ụka a ga-abụ n'ihi nrụgide gbakọtara na mmebi kemgbe ahụ. Laurent Bolinger, nke sitere na French Commission for Alternative Energies na Atomic Energy, na ndị otu ya tụrụ anya izu ole na ole gara aga na ala ọma jijiji dị ike ga-eme kpọmkwem ebe ọ mere.
Ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịchọpụta ịdị egwu nke ala ọma jijiji gara aga site na igwu olulu n'akụkụ mmebi nke gafere Nepal site na ọdịda anyanwụ ruo ọwụwa anyanwụ. Ruo ugbu a, achọtala ala ọma jijiji sitere n'afọ 1255, 1344 na n'oge na-adịbeghị anya site na 1934. N'ihi ohere nke ihe atụ, ndị ọkà mmụta sayensị malitere inwe nchegbu.
Nke ukwuu nke na dị ka Bollinger si kwuo a pụrụ inwe ala ọma jijiji ọhụrụdị ka nke ahụ mere n’ụbọchị ole na ole gara aga enweghị ike imebi ụwa. Ya mere, enwere ike ịmaliteghachi erughị ala n'okpuru elu ala ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ala ọma jijiji na Nepal, nke ndị sayensị kwuru
Ihe ndekọ okpomọkụ dị na akụkọ ihe mere eme na Spain